China Needle Roller Bearings abakhiqizi nabaphakeli | Xinri
● Ukuthwala i-Needle roller kunamandla amakhulu wokuthwala
● I-coefficient ephansi yokungqubuzana, ukusebenza kahle kokudlulisa
● Ukuthwala okuphezulu
● Isigaba esiphambene esincane
● Usayizi wobubanzi obungaphakathi nobukhulu bomthwalo kuyefana nezinye izinhlobo zamabhere, kanti ububanzi bangaphandle buncane kunabo bonke
Inaliti roller amabombo ngamabombo anama-roller ayi-cylindrical amancane ngobubanzi maqondana nobude bawo. Iphrofayili ye-roller / raceway eguquliwe ivimbela ukuphakama kwezingcindezi ukunweba impilo yokusebenza.
I-XRL ihlinzeka ngamabhere we-needle roller emiklamweni eminingi ehlukene, uchungechunge nakubukhulu obuhlukahlukene, okubenza balungele izimo ezahlukahlukene zokusebenza nezicelo.
1. Inaliti roller bearing iyindilinga ngesakhiwo, ngosayizi omncane nokuphakama kokushintshana ngokunemba, futhi ingathwala umthwalo othile we-axial ngenkathi ithwala umthwalo osabalalayo ophezulu. Futhi ifomethi yesakhiwo somkhiqizo yehlukile, ivumelana nezimo ebanzi, kulula ukuyifaka.
2. Ukuhlanganiswa kwenaliti yokuhlanganisa inhlanganisela yakhiwe nge-roller ye-centriole yenaliti kanye nebhola eligcwele, noma ibhola lokuphonsa, noma i-roller cylindrical roller, noma ibhola lokuxhumana le-angular, futhi lingathwala umthwalo we-axial unidirectional noma we-bidirectional. Kungabuye yakhelwe ngokuya ngezidingo ezikhethekile zabasebenzisi.
3. Ukuhlanganiswa kwenaliti yokuhlanganisa inaliti kusetshenziswa umgwaqo ophethe lapho i-shaft ehambisanayo yakhelwe khona, enezidingo ezithile kubulukhuni bokuthwala.
Isetshenziswa kabanzi kumathuluzi omshini, imishini yokusansimbi, imishini yendwangu nemishini yokuphrinta neminye imishini yokusebenza, futhi ingenza ukwakheka kohlelo lokukhanda kuhlangane futhi kube nobungcweti.
Langaphambilini Yelula Ball Bearings
Olandelayo: Amabombo we-Cylindrical Roller
ithusi impahla inaliti roller eziveza
ifektri ukuphakelwa kwenaliti roller amabombo
i-germany inch size size roller roller
I-intshi ekhishwe inkomishi yenaliti yokuthwala
inaliti roller eziveza
inaliti roller amabombo steel yezinyoni